Sekuyisikhathi eside Omunye ethandwa kakhulu iholidi izifunda Turkey kusuka izakhamuzi CIS kube Alanya. Kukhona plethora amahhotela yonke ukunambitheka kanye nesabelomali. I ekhethekile funa ofanayo Alanya kukhona amahhotela ekilasini umnotho, ngakho inani elikhulu zezivakashi imelelwa intsha. Ngaphezu emangalisayo beach iholide ulindelwe lapha uhlelo uhambo enobudlova futhi khona nenqwaba izitolo, izindawo zokudla, libhala, kuma-nightclub kanye nezinye ukuzijabulisa for wonke akuthandayo. Uma ufuna ukuba ngaphakathi ukuhamba ibanga lonke ingqalasizinda enkabeni esifundeni iholidi, kodwa usafuna ukwazi uphumule elinokuthula ne- endaweni ethule, indlela engcono yokuhlala isabelomali ngeke kleopatra Sahara Ihhotela 3 *. Namuhla sithola ukuthi leli hhotela balindelwe izivakashi, kanye zama ukuqonda ukuthi yini umbono kwesokunxele bakithi abaye bachitha amaholidi lapha.
Leli hhotela elincane ezimnandi sinendawo ezinhle kakhulu. Ngakho, cishe ogwini, nje 1.5 km maphakathi inhlokodolobha omunye resort izifunda elikhulu Turkey - Alanya. Vele drive ihora sika kusukela ehhotela ingenye ezihehayo ingxenye enkulu yezwe - Manavgat impophoma. Ibanga ukusuka ihhotela enqabeni Alanya wasendulo amakhilomitha amahlanu kuphela away. Ngakho ungathatha uhambo kumnandi abadumile izimpawu zendawo Turkish. Ngokuphathelene port emoyeni, eseduzane zazo itholakala amakhilomitha 125 kusukela ehhotela, emzini Antalya. Ngemva kokufika at komgwaqo sezindiza kleopatra Sahara Ihhotela 3 * (Alanya) kuzothatha cishe amahora amabili. Kodwa ungakhathazeki ngakho, ngoba isikhathi sokuhamba sishesha ngenkathi uyayijabulela ukuvulwa kwenkundla ka amafasitela ibhasi noma imoto ulalele izindaba ezithakazelisayo yomhlahlandlela mayelana Turkey ngokuvamile futhi ikakhulukazi esifundeni Alanya. Njengoba omunye amaphuzu abaluleke kakhulu ukuthi abantu unake lapho ekhetha ihhotela ogwini ezweni, iyona budebuduze ebhishi, siphinde awanakuziziba mbuzo. Ngokuphathelene nokubika kithi, ebhishi yangasese, ayinayo. Nokho, kukhona cishe ogwini. Ibanga kusuka isakhiwo eyinhloko ehhotela ebhishi eliseduze, okuyinto kamasipala, elingamamitha 100 kuphela. Ngesikhathi esifanayo endleleni kufanele siye ngaphesheya komgwaqo ukuwela ukuvakasha esisuka ngasogwini.
Indlela ukufinyelela kithi
Uma uthenga uhambo ukuze kleopatra Sahara Ihhotela 3 * ngokusebenzisa inkampani yokulungisela abahambayo, kungenzeka, kusuka esikhumulweni sezindiza ehhotela uzobe bayiswe ngebhasi isiqondiso. Uma uhlela uhambo oluya Alanya ngokwakho, khona-ke kuyomelwe ukuba sikhathazeke ngokuthi zokuthutha ehhotela. By the way, iningi amahhotela ahlinzeka siqu inkonzo yabo Shuttle esuka ethekwini emoyeni. Nokho, ngokuvamile abantu abakwazi ngokuthi ezishibhile. Ngakho-ke, siphakamisa ukuthi nibheke ongakhetha ukonga ngaphezulu. Ngokwesibonelo, endabeni ukufika e Antalya sezindiza kungenzeka ukufinyelela Alanya ngebhasi. Bagijima njalo kanye nohambo kwelinye direction kuyokulahlekisela ingqikithi ezinhlanu euro. Isikhathi sokuhamba kuyoba cishe amahora amabili. Ngo Alanya ahamba amabanga kuzokusa esiteshini, elise amakhilomitha amathathu ukusuka edolobheni. Kusuka lapha ehhotela engafinyelelwa noma ngebhasi noma ngetekisi. Uma ngaphambi kokuza Alanya ohlela ukuba uvakashele amanye amadolobha e-Turkey, ungakhetha indiza Gazipasa sezindiza. Kuyinto nje isigamu sehora kude Alanya futhi ukhonza izindiza ezifuywayo kuphela.
Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuthola Alanya nolwandle. Ngakho, ethekwini lo muzi lihlale njalo izikebhe ezivela Kyrenia, elise North Cyprus. Izindleko loluhambo siyizinsuku 32 euro eyodwa ngendlela.
Alanya kleopatra Sahara Ihhotela: isithombe kanye nencazelo
Leli hhotela lakhiwa ngo-1996. Ukwakha sokugcina kwenziwe lapha ngo-2008. Ihhotela Okubukwe lincane ngokwanele. Ngakho, it siqukethe isakhiwo multi-storey ehlanganisa 33 amakamelo ukhululekile. Le ndawo ngensimu yehhotela ngokwayo kuyinto 600 square metres. Ngaphandle isakhiwo yokuhlala main, kukhona yokudlela, ibha, ongaphandle indawo yokubhukuda, ithala bethamele ilanga, volleyball enkantolo futhi yokupaka. Ihhotela "kleopatra Sahara" akukho izithombe, ukuze ukwazi uphumule lapho kunokuthula nokuzola. Uma ufuna ukuzijabulisa ezinomsindo, udinga kuphela isinyathelo ngaphandle ehhotela, ngoba izindawo zako ezizungezile kukhona inala zokudla, nemishayo, amakilabhu, izitolo, izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo, nokunye. D. kleopatra Sahara Ihhotela 3 * ukhululekile kokubili abasha nomndeni izivakashi nezingane kanye nabantu abadala.
Ngokuhambisana yokubhuka esamukelekile "Cleopatra Sugars" imithetho yangaphakathi sokuxazulula izivakashi ngokuhlala nokuqhuba 12 ezimpondweni. Nokho, lokhu akusho ukuthi, njengoba ayefike ehhotela ngaphambi, ngokuqinisekile kufanele ulinde emini. Uma kleopatra Sahara ukutholakala, wena kuzogcwalisa ngokushesha lapho usufika kuleyo ndawo. Nokho, ngesikhathi ibambene isizini izivakashi, ihhotela ligcwele ngamaphesenti ayikhulu, ngakho uma ifika ekuseni kuzodingeka silinde kuze kube igumbi hhayi kudedelwa kusuka izivakashi odlule nezincekukazi musa balungiselelwe kahle. Ngesikhathi besohambweni isikhathi sokulinda kungaba amabombo yokudlela, ichibi, noma ngqo ogwini. Ngokuphathelene nosuku ukuhamba, kubalulekile ukukhulula egumbini lakho ngaphambi 11 ekuseni. Kulokhu, ekulethweni izihluthulelo edilini lomshado kumele akhokhe yonke inkathi kokuhlala. Ukuze kwamukelwe inkokhelo njengoba imali namakhadi wesikweletu "Visa" futhi "MasterCard".
Indawo yezivakashi nezingane
Kusukela ehhotela kleopatra Sahara 3 * ukubeka ngokwayo kuhlanganise umndeni njengoba isikhungo, kuzoba kuphela siyojabula uma uza iholide nezingane zabo bonke ubudala. Kulokhu, uma beka ingane kweminyaka emithathu ekhona Igumbi zokulala noma ingane kuze iminyaka emibili ingane indlwana, ukhokha extra akanayo ngoba. Endabeni yokuhlala egumbini lakho ingane endala noma omdala i Embhedeni owenezelwe kuzobiza nawe 10 euro ngosuku. Kulokhu, kuphela embhedeni munye omdala eyengeziwe noma ingafakwa egumbini ngalinye playpen.
Indawo izivakashi ezifuywayo
Le nto kuyoba kubaluleke kakhulu kulabo abahambi abangafuni ukuba ahlukane izilwane ezine-ezinemilenze, ngisho eholidini. Ngakho, ngeshwa, imithetho sangaphakathi kleopatra Sahara Ihhotela kungavunyelwe yokuhlala ensimini ka lezihambi ehhotela ezifuywayo. Ngakho, kufanele noma ufune omunye ehhotela, eziphathelene "ezifuywayo-friendly" isigaba, noma okunye ushiye isilwane sakho ekhaya ngesikhathi hambo.
Njengoba sekushiwo, kleopatra Sahara Beach Ihhotela 3 * siqukethe izindlu 33 kuhlanganise samakamelo ahamba ngamabili kanye kathathu ejwayelekile. Zonke amafulethi ezikahle nezingakwazi umane ahlotshiswa. Inkonde ngayinye ifakwe umshini yokugezela ayimfihlo hairdryer, air conditioning, satellite TV, ucingo kanye kuvulandi noma ithala. Esitezi - enamathela sobumba. Njalo, ihhotela inikeza izindlu kanye noshintsho amathawula kanye amashidi. Ngaphezu kwalokho, izivakashi nethuba oda ikamelo inkonzo.
Izindleko yokuhlala kuleli hhotela zihlanganisa ukudla ohlelweni "zonke okufakayo". Ukudla kwasekuseni, kwasemini kanye dinner ongakwenza yokudlela main. Kufanele kuqashelwe ukuthi amandla kleopatra Sahara Ihhotela, abahambi Izibuyekezo kuphela uqinisekise lesi Eqinisweni, it is ihlelwe ezingeni eliphezulu. Lapha siyonikwa sokudla okwehla esiphundu cuisine Turkish ngamazwe. Ngaphezu kwalokho, ihhotela izici ibha nge Ukukhetha eziningi iziphuzo yonke ukunambitheka.
Njengoba sekushiwo, kleopatra Sahara Ihhotela yangasese lolwandle akanayo. Beach eliseduze kuyinto amamitha angamakhulu ambalwa ukusuka kwehhotela lethu futhi kuyinto kamasipala. Lapha, for imali eyengeziwe ungasebenzisa izihlalo emphemeni, omatilasi, ilanga izambulela, kanye ezihlukahlukene imishini ezemidlalo nokuzijabulisa phezu kwamanzi.
Kusukela kleopatra Sahara Ihhotela 3 * kuyihhotela encane, kukhona Ukukhetha eziningi kangaka okudingeka ukuzijabulisa, kokubili izakhiwo ezinkulu ehhotela. Nokho, "Cleopatra Sahara" izivakashi ungakwazi ukujabulela ngokugcwele isikhathi sakho. Ngakho, izinkonzo zawo lapha ufaka ongaphandle indawo yokubhukuda nge emphemeni ilanga ifakwe ilanga loungers nezambulela, inkantolo-volleyball, pool yezingane. On endaweni eseduze ngasogwini has konke okudingayo ukuze ukuzilibazisa kanye nemidlalo phezu kwamanzi.
Mayelana nengqalasizinda, le ehhotela ezintathu-star "kleopatra Sahara" (Alanya, Turkey) kukhona zonke izimo ngoba ukhululekile yokuchitha isizungu izivakashi. Ngakho-ke, amakamelo anemisila konkhe lokudzingekile kanye yokudlela, bar futhi yokupaka. Ebhekisela reception, ungase uyishintshe lwemali, shayela udokotela, ukuqasha imoto, ukubhuka uhambo futhi uthole izimpendulo zayo yonke imibuzo. Ngaphezu kwalokho, wayehlala phambi edeskini ungakwazi ushiye izinto yokugcina kule ephephile. izindawo Ihhotela esesidlangalaleni babe zokungena Inthanethi.
Kusukela ehhotela "kleopatra Sahara" (Alanya, Turkey) kuyinto ezintathu-star ke isigaba intengo ke singasho sithi isigaba isabelomali. Ngakho, indawo yokuhlala wezinsuku eziyisikhombisa lapha isizini okusezingeni eliphezulu (July-August) izobiza ngawe inani ruble 23 000 (i kuzo olulodwa), kusuka 27 250 ruble (elijwayelekile eliyidabuli) kanye 37 600 ruble (Igumbi kathathu). Lezi izintengo zifaka ukudla ohlelweni "zonke okufakayo".
Kleopatra Sahara Ihhotela 3 *: Izibuyekezo
Ufuna nje uqaphele ukuthi iningi amazwana ngalokhu ehhotela akhayo. Ngakho, inani bakithi bazithola ngempela ivulekile ebizayo. Sinenkosi konke okudingayo ukuze ukuhlala kwakho. UNkulunkulu wajabula ngokuthi ingxenye amakamelo uzokubonisa izindawo ezinhle kakhulu kolwandle. Ukuhlanzwa amakamelo kwenziwa nsukuzonke, njalo ushintsha amathawula nelineni.
Okuhlangenwe nakho okuningi afanele amayelana ehhotela "kleopatra Sahara", ushiye yaseRussia lendawo ugesi. Ngakho, uma ibhulakufesi abanye abantu bakithi wathola kancane okuyisidina, kwasikiselwa ukuthi ukudla kwasemini kanye dinner, asikhali ngalutho. Ngokusho izivakashi eziningi, ezingeni ukudla lapha kuphezulu kakhulu ehhotela inkanyezi ezintathu.
Sajabulela compatriot yethu futhi indawo ehhotela. Beach lapha ngempela ambalwa nje amamitha. Ngaphezu kwalokho, ngezinyawo ungakwazi ukufinyelela inqaba yasendulo ka Alanya nazo zonke ezikhangayo esemqoka kulo muzi.
Kafushane, leli hhotela, ngokubona baseRussia baye bavakashela, kuba inani kangcono imali. izivakashi eziningi zilungele buya lapha futhi esikhathini esizayo.
Volzhsky ehhotela umuzi "Akhtuba": izithombe, ikheli
Ihhotela Awugustu 3 * (Costa Dorada): incazelo kanye nokubuyekeza
Amanzi epaki Sudak - i iholide ngiyilibale!
Izindlela zokudweba ipensela: ukuqeqeshwa
Ukuphila komuntu siqu, biography, amaqiniso ethakazelisayo Dzhonni Galeki (Johnny Galecki)